ဇဲလျဘုနဲ့ ပှဲမှာ လီဗာပူးတို့ ဘာတှေ မှားယှငျးခဲ့သလဲဆိုတာ ရှငျးပွလိုကျပွီး ဒီလို ခံစဈကစားပုံမြိုးနဲ့သာ ဆိုရငျ ဂမြေီဗာဒီ တဈဦးတညျး ၅ ဂိုးသှငျးသှားလိမျ့မယျလို့ ဆိုလိုကျတဲ့ ယာဂနျကလော့ - SPORTS MYANMAR
ဇဲလျဘုနဲ့ ပှဲမှာ လီဗာပူးတို့ ဘာတှေ မှားယှငျးခဲ့သလဲဆိုတာ ရှငျးပွလိုကျပွီး ဒီလို ခံစဈကစားပုံမြိုးနဲ့သာ ဆိုရငျ ဂမြေီဗာဒီ တဈဦးတညျး ၅ ဂိုးသှငျးသှားလိမျ့မယျလို့ ဆိုလိုကျတဲ့ ယာဂနျကလော့
ယာဂနျကလော့က သူ့ရဲ့ အသငျး အနနေဲ့ ရကျဘူးဇဲလျဘု အသငျးနဲ့ ပှဲက ခံစဈ ကစားပုံမြိုးနဲ့သာ ဆိုရငျ လာမညျ့ စနနေမှေ့ာ လကျစတာစီးတီး ဂိုးသှငျးစကျ ဂမြေီဗာဒီရဲ့ ခမြှေုနျးမှုကို ခံရလိမျ့မယျလို့ သတိပေး သှားခဲ့ပါတယျ။ လီဗာပူးဟာ မနညေ့က စိတျလှုပျရှား စရာ ကောငျးခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ ပှဲစဉျမှာ ဇဲလျဘု အသငျးကို ၄-၃ နဲ့ အနိုငျ ရရှိ ခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ လီဗာပူးဟာ ၃ ဂိုးပွတျ နိုငျနတော ကနေ ခပြေဂိုး ၃ ဂိုးစလုံးကို ပွနျပေးခဲ့ရတာ ဖွဈပွီး ကလော့က ဒါကို ဆိုးရှားတဲ့ ခံစဈကစားပုံလို့ မှတျခကျြပေး လိုကျပါတယျ။ မိုဆာလား ဟာ ၆၉ မိနဈမှာ လီဗာပူး အတှကျ အနိုငျဂိုးကို သှငျးယူ ပေးခဲ့တာ ဖွဈပမေယျ့ ကလော့က သူ့ရဲ့ အသငျး အနနေဲ့ လာမညျ့ စနနေေ့ ပရီးမီးယားလိဂျ အိမျကှငျး ပှဲစဉျမှာ ဒီရာသီ ပုံစံကောငျး ရနတေဲ့ ဂမြေီဗာဒီ နဲ့ လကျစတာ တို့ကို ဒီလို ခံစဈ ကစားပုံမြိုး ပွသ သှားလို့ မရဘူးလို့ သတိပေး လိုကျပါတယျ။
လီဗာပူး နညျးပွဟောငျး ရျောဂြာဟာ လကျစတာကို ဒီရာသီ အမှတျပေးဇယား ရဲ့ အဆငျ့ ၃ နရောကို ပို့ဆောငျ ပေးထားခဲ့ပွီး ခနျြပီယံလိဂျ ၀ငျခှငျ့ အတှကျ ပရီးမီးယားလိဂျ ရဲ့ big6ကို ယှဉျပွိုငျနိုငျဖို့ ရညျရှယျ နတေဲ့ အသငျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဗာဒီ ကလညျး ဒီရာသီ အသငျး အတှကျ ငါးဂိုး သှငျးကာ ခွစှေမျးပွ ကစားနပွေီး ယာဂနျကလော့က ဇဲလျဘု နဲ့ ပှဲကလို ပုံစံမြိုးတှေ မှားယှငျးခဲ့မယျ ဆိုရငျ ဗာဒီ တဈဦးတညျး ငါးဂိုးလောကျ သှငျးသှားမှာ ဖွဈတယျလို့ သူ့အသငျးကို သတိပေး သှားခဲ့ပါတယျ။
လီဗာပူးဟာ ပှဲခြိနျ ၃၆ မိနဈ အတှငျးမှာတငျ အကောငျးဆုံး တိုကျစဈ ကစားပုံနဲ့ ဇဲလျဘုကို ၃-၀ နဲ့ အနိုငျ ရထား ခဲ့ပမေယျ့ ဧညျ့သညျ့အသငျးဟာ ပှဲခြိနျ ၁ နာရီ အတှငျးမှာပဲ ဂိုးအားလုံးကို ပွနျလညျ ခပြေခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ကလော့ က “ကြှနျတျော ဒါကို ဘယျလို ရှငျးပွ ရမှာလဲ? ကြှနျတျောတို့ဟာ ပထမပိုငျး မိနဈ ၃၀ လောကျမှာ အရမျးကို ကောငျးမှနျလှတဲ့ ကစားပုံကို ပွသ ခဲ့တာတော့ သိသာ ထငျရှားပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဟာ သူတို့ မနှဈသကျတာ အားလုံးလုပျခဲ့ပွီး မွနျနှုနျးမွငျ့ ကစားပုံ ၊ သှငျးဂိုး ၃ ဂိုး သှငျးယူ ခဲ့ပွီး ၊ ဒီထကျတောငျ ဂိုးရသငျ့ ခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ နညျးစနဈ အပွောငျးအလဲ လုပျခဲ့ပွီး ဒါဟာ ကြှနျတျောတို့ အတှကျ ပွသနာ မဟုတျခဲ့ ပမေယျ့ ဒါကို အလုပျဖွဈအောငျ ခှငျ့ပွု ခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ကလညျး ပှဲခညျြးကပျပုံကို အကွောငျးရငျး တဈခြို့ကွောငျ့ ပွောငျးလဲ ခဲ့ပါတယျ။ တဈခြို့ဟာ ပှဲကို ထိနျးခြုပျခငျြ နပွေီး တဈခြို့ဟာ တိုကျစဈဆငျ ကစားခငျြကွပါတယျ။ အခွား နရောတှကေလညျး ဟိုလုပျရမလို ဒီလုပျရမလို ဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။
အဓိက ပွသနာကတော့ ကြှနျတျောတို့ ကှငျးလယျပိုငျးမှာ အခွအေနေ အားလုံးကို အပွီးသတျဖို့ ကွိုးစားခဲ့လို့ပါ။ သူတို့ဟာ ခံစဈ ဧရိယာမှာ ကှငျးလယျလူ တဈဦးလြော့ခြ ခဲ့ပါတယျ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ဟာ စှနျ့စားလိုကျတာ ဖွဈပွီး နံပါတျ ၁၀ကို ကြှနျတျောတို့ ကှငျးလယျစညျး နောကျမှာ ထားကစား ခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ကှငျးလယျမှာ တဈယောကျလြော့ နပေမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ဟာ အလယျကနပေဲ ထိုးဖောကျဖို့ ကွိုးစား နတေုနျးပါ။ ကြှနျတျောတို့ အဲဒီမှာ ဘောလုံးတှေ ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ဟာ နံပါတျ ၁၀ ကို ဘောလုံး ထိုးပေးလိုကျပွီး သူဟာ ဖာဘငျညို ရဲ့ နောကျမှာ ဘောလုံးကို ကိုငျကစား နိုငျခဲ့ကာ တနျပွနျ တိုကျစဈဆငျ ခဲ့ပါတယျ။ ဒါဟာ ပှဲရဲ့ အဟုနျကို အပွောငျးအလဲ ဖွဈစေ ခဲ့ပါတယျ။
ဇဲလျဘု ရဲ့ သမိုငျးကွောငျး အရ သူတို့ဟာ အလှယျအတူ အားမလြော့တကျ ပါဘူး။ အနျဖီးမှာ ၃-၀ နဲ့ ရှုံးနပွေီ ဆိုရငျ လကျလြော့သှားတကျတဲ့ အသငျးတှေ ရှိခဲ့ပမေယျ့ သူတို့ မပါပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ တံခါးဖှငျ့ပေး ခဲ့ပွီး သူတို့ဟာ ဒီကနေ ဖွတျကြျော ၀ငျရောကျ ခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဟာ ပေးလိုကျရတဲ့ ဂိုး ၃ ဂိုး စလုံးမှာ ဘောလုံးတှေ လှယျလှယျ ဆုံးရှုံး ခဲ့ပါတယျ။ ကိုယျ့ဘကျက ၃-၁ နဲ့ နိုငျနရေဲ့သားနဲ့ တနျပွနျတိုကျစဈ ဆငျခံရတယျ ဆိုတာ အဓိပ်ပာယျတော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒီလိုဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ အတှကျ အရမျးကို ကွီးကွယျတဲ့ သငျခနျးစာ ဖွဈပွီး ၄-၃ နဲ့ ရှုံးခဲ့မယျ ဆိုရငျလညျး မပွောငျးလဲပါဘူး။ အခု ကြှနျတျောတို့ နိုငျခဲ့တဲ့ အတှကျ အိုကပေါတယျ။ အမြားကွီး သငျယူရအုံးမှာပါ။
ကြှနျတျောတို့ အမြားကွီး တိုးတကျဖို့ လိုအပျဆိုတာ သိထားပါတယျ။ အခု ဆို၇ငျ အားလုံး သိသှားပွီ ထငျပါတယျ။ ဒါဟာ အိုကပေါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ လိုတာထကျ ပိုပွီး အားထုတျခဲ့ကွ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရလဒျကောငျးကိုတော့ ရယူ နိုငျခဲ့ပါတယျ။ အုပျစုမှာ ၃ မှတျ ရခဲ့တာကွောငျ့ ခရီးဆကျလို့ ရသှားပါပွီ။ အခုဆိုရငျ ပွနျလညျ အားယူပွီး လကျစတာ နဲ့ ရငျဆိုငျ သှားမှာပါ။” လို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
ဆကျလကျပွီး ကလော့ က “လှနျခဲ့တဲ့ ၂ နှဈ ၃ နှဈ လောကျနဲ့ ယှဉျလိုကျမယျ ဆိုရငျတော့ အသငျးရဲ့ စရိုကျလက်ခဏာ တိုးတကျလာခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ကောငျးမှနျတဲ့ အရာတှေ အမြားကွီး လုပျခဲ့တာကွောငျ့ ဒီလို မဟုတျဘူးပွောရငျ ရူးမိုကျရာ ကပြါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ အခု ကြှနျတျောတို့ ကိုယျ့ကိုကျိုယျ ယုံကွညျမှု ဆုံးရှုံး ခဲ့မယျ ဆိုရငျ ပှဲတှမှော ပိုမို ခကျခဲ သှားပါလိမျ့မယျ။ ဒီည အတှကျတော့ အလုပျပွီးမွောကျ ခဲ့ပါပွီ။
ဒါပမေယျ့ စနနေမှေ့ာလညျး ဒီလိုမြိုး အလုပျ ရှိပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့မှာ recover လုပျဖို့ အခြိနျ ၃ ရကျပဲ ရပါတယျ။ ခရဈရှနျဖူ့ချြဟာ ဒီပှဲကို သတငျးတငျဆကျသူ အနနေဲ့ လာကွညျ့ခဲ့ပါတယျ။ အခွား လကျစတာ ကစားသမားတှလေညျး ဆိုဖာမှာ ထိုငျပွီး ဒီပှဲကို ကွညျ့ခဲ့ ကွမှာပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒါဟာ လာမညျ့ ပှဲအတှကျ ပွငျဆငျရာမှာ အနညျးငယျ ခကျခဲမှု ရှိပါတယျ။ သခြောတာကတော့ ကြှနျတျောတို့သာ ဒီညကလို ခံစဈ ကစားပုံမြိုး ပွသခဲ့မယျ ဆိုရငျ ဂဗြေီဗာဒီ တဈဦးတညျး ငါးဂိုးလောကျ သှငျးနိုငျ လိမျ့မယျလို့ ဘရနျဒနျရျောဂြာ တှေးနေ ပါလိမျ့မယျ။” လို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
ဇဲလ်ဘုနဲ့ ပွဲမှာ လီဗာပူးတို့ ဘာတွေ မှားယွင်းခဲ့သလဲဆိုတာ ရှင်းပြလိုက်ပြီး ဒီလို ခံစစ်ကစားပုံမျိုးနဲ့သာ ဆိုရင် ဂျေမီဗာဒီ တစ်ဦးတည်း ၅ ဂိုးသွင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ယာဂန်ကလော့
ယာဂန်ကလော့က သူ့ရဲ့ အသင်း အနေနဲ့ ရက်ဘူးဇဲလ်ဘု အသင်းနဲ့ ပွဲက ခံစစ် ကစားပုံမျိုးနဲ့သာ ဆိုရင် လာမည့် စနေနေ့မှာ လက်စတာစီးတီး ဂိုးသွင်းစက် ဂျေမီဗာဒီရဲ့ ချေမှုန်းမှုကို ခံရလိမ့်မယ်လို့ သတိပေး သွားခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ မနေ့ညက စိတ်လှုပ်ရှား စရာ ကောင်းခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်မှာ ဇဲလ်ဘု အသင်းကို ၄-၃ နဲ့ အနိုင် ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လီဗာပူးဟာ ၃ ဂိုးပြတ် နိုင်နေတာ ကနေ ချေပဂိုး ၃ ဂိုးစလုံးကို ပြန်ပေးခဲ့ရတာ ဖြစ်ပြီး ကလော့က ဒါကို ဆိုးရွားတဲ့ ခံစစ်ကစားပုံလို့ မှတ်ချက်ပေး လိုက်ပါတယ်။ မိုဆာလား ဟာ ၆၉ မိနစ်မှာ လီဗာပူး အတွက် အနိုင်ဂိုးကို သွင်းယူ ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် ကလော့က သူ့ရဲ့ အသင်း အနေနဲ့ လာမည့် စနေနေ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အိမ်ကွင်း ပွဲစဉ်မှာ ဒီရာသီ ပုံစံကောင်း ရနေတဲ့ ဂျေမီဗာဒီ နဲ့ လက်စတာ တို့ကို ဒီလို ခံစစ် ကစားပုံမျိုး ပြသ သွားလို့ မရဘူးလို့ သတိပေး လိုက်ပါတယ်။
လီဗာပူး နည်းပြဟောင်း ရော်ဂျာဟာ လက်စတာကို ဒီရာသီ အမှတ်ပေးဇယား ရဲ့ အဆင့် ၃ နေရာကို ပို့ဆောင် ပေးထားခဲ့ပြီး ချန်ပီယံလိဂ် ၀င်ခွင့် အတွက် ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ big6ကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ် နေတဲ့ အသင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗာဒီ ကလည်း ဒီရာသီ အသင်း အတွက် ငါးဂိုး သွင်းကာ ခြေစွမ်းပြ ကစားနေပြီး ယာဂန်ကလော့က ဇဲလ်ဘု နဲ့ ပွဲကလို ပုံစံမျိုးတွေ မှားယွင်းခဲ့မယ် ဆိုရင် ဗာဒီ တစ်ဦးတည်း ငါးဂိုးလောက် သွင်းသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သူ့အသင်းကို သတိပေး သွားခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူးဟာ ပွဲချိန် ၃၆ မိနစ် အတွင်းမှာတင် အကောင်းဆုံး တိုက်စစ် ကစားပုံနဲ့ ဇဲလ်ဘုကို ၃-၀ နဲ့ အနိုင် ရထား ခဲ့ပေမယ့် ဧည့်သည့်အသင်းဟာ ပွဲချိန် ၁ နာရီ အတွင်းမှာပဲ ဂိုးအားလုံးကို ပြန်လည် ချေပခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလော့ က “ကျွန်တော် ဒါကို ဘယ်လို ရှင်းပြ ရမှာလဲ? ကျွန်တော်တို့ဟာ ပထမပိုင်း မိနစ် ၃၀ လောက်မှာ အရမ်းကို ကောင်းမွန်လှတဲ့ ကစားပုံကို ပြသ ခဲ့တာတော့ သိသာ ထင်ရှားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ သူတို့ မနှစ်သက်တာ အားလုံးလုပ်ခဲ့ပြီး မြန်နှုန်းမြင့် ကစားပုံ ၊ သွင်းဂိုး ၃ ဂိုး သွင်းယူ ခဲ့ပြီး ၊ ဒီထက်တောင် ဂိုးရသင့် ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ နည်းစနစ် အပြောင်းအလဲ လုပ်ခဲ့ပြီး ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ အတွက် ပြသနာ မဟုတ်ခဲ့ ပေမယ့် ဒါကို အလုပ်ဖြစ်အောင် ခွင့်ပြု ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ကလည်း ပွဲချည်းကပ်ပုံကို အကြောင်းရင်း တစ်ချို့ကြောင့် ပြောင်းလဲ ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချို့ဟာ ပွဲကို ထိန်းချုပ်ချင် နေပြီး တစ်ချို့ဟာ တိုက်စစ်ဆင် ကစားချင်ကြပါတယ်။ အခြား နေရာတွေကလည်း ဟိုလုပ်ရမလို ဒီလုပ်ရမလို ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
အဓိက ပြသနာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာ အခြေအနေ အားလုံးကို အပြီးသတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့လို့ပါ။ သူတို့ဟာ ခံစစ် ဧရိယာမှာ ကွင်းလယ်လူ တစ်ဦးလျော့ချ ခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ဟာ စွန့်စားလိုက်တာ ဖြစ်ပြီး နံပါတ် ၁၀ကို ကျွန်တော်တို့ ကွင်းလယ်စည်း နောက်မှာ ထားကစား ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကွင်းလယ်မှာ တစ်ယောက်လျော့ နေပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ အလယ်ကနေပဲ ထိုးဖောက်ဖို့ ကြိုးစား နေတုန်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ အဲဒီမှာ ဘောလုံးတွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ နံပါတ် ၁၀ ကို ဘောလုံး ထိုးပေးလိုက်ပြီး သူဟာ ဖာဘင်ညို ရဲ့ နောက်မှာ ဘောလုံးကို ကိုင်ကစား နိုင်ခဲ့ကာ တန်ပြန် တိုက်စစ်ဆင် ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ပွဲရဲ့ အဟုန်ကို အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေ ခဲ့ပါတယ်။
ဇဲလ်ဘု ရဲ့ သမိုင်းကြောင်း အရ သူတို့ဟာ အလွယ်အတူ အားမလျော့တက် ပါဘူး။ အန်ဖီးမှာ ၃-၀ နဲ့ ရှုံးနေပြီ ဆိုရင် လက်လျော့သွားတက်တဲ့ အသင်းတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် သူတို့ မပါပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တံခါးဖွင့်ပေး ခဲ့ပြီး သူတို့ဟာ ဒီကနေ ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက် ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပေးလိုက်ရတဲ့ ဂိုး ၃ ဂိုး စလုံးမှာ ဘောလုံးတွေ လွယ်လွယ် ဆုံးရှုံး ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က ၃-၁ နဲ့ နိုင်နေရဲ့သားနဲ့ တန်ပြန်တိုက်စစ် ဆင်ခံရတယ် ဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်တော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အတွက် အရမ်းကို ကြီးကြယ်တဲ့ သင်ခန်းစာ ဖြစ်ပြီး ၄-၃ နဲ့ ရှုံးခဲ့မယ် ဆိုရင်လည်း မပြောင်းလဲပါဘူး။ အခု ကျွန်တော်တို့ နိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် အိုကေပါတယ်။ အများကြီး သင်ယူရအုံးမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ အများကြီး တိုးတက်ဖို့ လိုအပ်ဆိုတာ သိထားပါတယ်။ အခု ဆို၇င် အားလုံး သိသွားပြီ ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာ အိုကေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လိုတာထက် ပိုပြီး အားထုတ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရလဒ်ကောင်းကိုတော့ ရယူ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အုပ်စုမှာ ၃ မှတ် ရခဲ့တာကြောင့် ခရီးဆက်လို့ ရသွားပါပြီ။ အခုဆိုရင် ပြန်လည် အားယူပြီး လက်စတာ နဲ့ ရင်ဆိုင် သွားမှာပါ။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ကလော့ က “လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ် ၃ နှစ် လောက်နဲ့ ယှဉ်လိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ အသင်းရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကောင်းမွန်တဲ့ အရာတွေ အများကြီး လုပ်ခဲ့တာကြောင့် ဒီလို မဟုတ်ဘူးပြောရင် ရူးမိုက်ရာ ကျပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု ဆုံးရှုံး ခဲ့မယ် ဆိုရင် ပွဲတွေမှာ ပိုမို ခက်ခဲ သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီည အတွက်တော့ အလုပ်ပြီးမြောက် ခဲ့ပါပြီ။
ဒါပေမယ့် စနေနေ့မှာလည်း ဒီလိုမျိုး အလုပ် ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ recover လုပ်ဖို့ အချိန် ၃ ရက်ပဲ ရပါတယ်။ ခရစ်ရှန်ဖူ့ခ်ျဟာ ဒီပွဲကို သတင်းတင်ဆက်သူ အနေနဲ့ လာကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ အခြား လက်စတာ ကစားသမားတွေလည်း ဆိုဖာမှာ ထိုင်ပြီး ဒီပွဲကို ကြည့်ခဲ့ ကြမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဒါဟာ လာမည့် ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ရာမှာ အနည်းငယ် ခက်ခဲမှု ရှိပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ကျွန်တော်တို့သာ ဒီညကလို ခံစစ် ကစားပုံမျိုး ပြသခဲ့မယ် ဆိုရင် ဂျေဗီဗာဒီ တစ်ဦးတည်း ငါးဂိုးလောက် သွင်းနိုင် လိမ့်မယ်လို့ ဘရန်ဒန်ရော်ဂျာ တွေးနေ ပါလိမ့်မယ်။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။